8 Tsy misy fomba Bullsh * t hiatrehana ny fandavana tsy tapaka - An-Tsaina
8 Tsy misy fomba Bullsh * t hiatrehana ny fandavana tsy tapaka
Mety hahakivy tokoa izany raha ny valiny henonao dia 'tsia'.
Ny fandavana tsy an-kijanona dia mety hanimba be dia be ny fahatsapan'ny olona fa misy vidiny.
Raha miatrika fandavana ianao dia mety mahatsapa fa tsy mety amin'ny toerana rehetra ianao fa tsy misy olona maniry anao. Ary fahatsapana mahatsiravina izany.
Izany dia mety ho valin'ny asa na sekoly nampihatrainao, vondrona ara-tsosialy nangatahinao hiditra, na olona nanantona tamim-pitiavana anao.
Na dia manandrana mamoy anao amin'ny fomba malefaka aza ny olona, ​​toy ny fampahafantarana anao fa saika * nahazoanao ilay asa ianao, na hoe tena tian'izy ireo ho namana ianao dia mbola mankarary fo ihany ny fandavana azy.
Rehefa mahatsapa ny olona iray fa nolavina tsy tapaka izy ireo, dia misy tolotra lehibe tsy voatanisa amin'ny fahatokisan-tenany amin'ny ankapobeny. Ny 'tsia' rehetra dia tsapa ho toy ny puce iray hafa voasokitra ho azy ireo, nefa tsy nasiana fanampiana mba hananganana azy ireo indray.
Ny fiatrehana fandavana tsy tapaka dia sarotra, fa tsy azo atao mihitsy. Misy teknika azonao andramana manampy anao hamakivaky azy io, ary hisorohana anao tsy hiala ihany koa.
1. Mianara tsy hifikitra amin'ny vokatra.
Ny fomba iray tsara hialana amin'ny ratram-po amin'ny fandavana dia ny tsy miraikitra amin'ny vokatra mety hitranga.
Ohatra, maro ny olona no tratry ny mety mety hitranga avy amin'ny zavatra X mitranga.
ahoana no ahafoizako ny fitiavana
Andao lazaina fa misy olona manao dinidinika momba ny asa ho avy. Mety manomboka mieritreritra ny tombam-bidin'ny asa izy ireo - ny gym eo an-toerana (afaka mahazo endrika izy!), Karama be (afaka mahazo trano vaovao izy ireo!), Sns. Mamorona firaiketam-po amin'ny nofinofy izy ireo MEY namelabelatra RAHA azon'izy ireo izany asa izany.
Vokatr'izany dia ho rava tanteraka izy ireo raha tsy mahazo.
Namorona fatorana ara-pihetseham-po amin'ny nofinofy izy ireo fa tsy mijanona eo. Raha izany dia nitranga ny ratra ara-pihetseham-pon'izy ireo satria tsy nipoitra ny nofinofisin'izy ireo.
Miezaha hijanona amin'izao fotoana izao, ary valio fa tsy hamaly. Raha manana dinidinika momba ny asa ianao, tsara. Tanjomy ny hitazomana ny fihetseham-ponao momba izany tsy miandany mihitsy.
famantarana nofitahiny tamin'ny lasa
Azo antoka fa afaka miditra amin'ny resadresaka amin'ny alàlan'ny angovo tsara, ny fisakaizana ary ny fahatokisan-tena ianao, saingy amin'ny ambaratonga fototra, dia raiso ho toy ny tsy ilainao izany.
Amin'izany fomba izany, raha tsy mivoaka izy, dia tsy ho diso fanantenana. Azonao atao ny mamela ny tenanao hientanentanana amin'izany raha sy rehefa mahazo fifanarahana vita sonia ianao, fa tsy alohan'izay.
Toy izany koa ny daty tantaram-pitiavana, ny fampiharana any an-tsekoly, sns. Raha tsy misaraka ny iray dia azo antoka ny iray hafa.
2. Fantaro fa ny fandavana dia mety ho fanomezana.
Betsaka ny olona no voaozona noho ny fahazoana izay tena niriny. Na dia mety hahatsapa aza ianao fa ny fandavana tsy an-kijanona dia manosika anao hiala, dia mety ho fitahiana miafina.
Mety hokapohina miaraka amin'ny olona manohitra anao foana ianao, ary kivy fa 'tsy mila anao.' Ahoana anefa raha tsy mifanaraka amin'ny lafiny maro ianao? Sa ahoana raha olona misy poizina any ambanin'ny tany izy ireo ary ratsy fitondran-tena anao? Ho loza ny fiarahana ary hahatsapa ho mahatsiravina ianao.
'Ny zava-drehetra mitranga amin'ny antony' dia tsy mampionona tokoa rehefa mahatsapa ho tsy misy dikany ianao, saingy matetika dia marina izany raha jerena.
3. Mahatakatra ny lalàn'ny salan'isa.
Misy olona taloha milaza fa raha manipy fotaka ampy amin'ny rindrina ianao, amin'ny farany dia hifikitra ny sasany aminy.
ianareo dia mahomby amin'ny farany. Resaka fikirizana sy fiezahana araka izay fara herinao mba tsy hahatsapana ho misy 'tsy mety' aminao. Satria tsy misy.
Sombin'ny ankamantatra ianao, amin'izao fotoana izao manandrana piozila samihafa hahitanao izay toerana mety indrindra aminao. Hanindry eo amin'ny toerany ny zavatra amin'ny farany.
4. Tazomy ny lisitry ny olona nolavina talohan'ny nahombiazany.
Fantatrao ve izany olona be dia be niatrika fandavana tsy tapaka talohan'ny 'nahavitany azy' tamin'ny farany? Ankoatr'izay, maro tamin'izy ireo no nanao izany araka ny fombany.
Ohatra, mety hainao tsara ireo akanjo noforonin'ny maventa lamaody Vera Wang. Fantatrao ve fa nolavina i Wang noho ny ekipa mpilalao skating olympika amerikana tamin'ny taona 1960? Niasa tamina tonian-dahatsoratra tao Vogue nandritra ny fotoana kelikely izy, ary nanomboka nanamboatra akanjo mariazy ho an'ny fahafinaretana tamin'ny faha-40 taonany. Tonga mpamorona fanta-daza iraisam-pirenena izy.
JK Rowling dia renim-pianakaviana tokan-tena momba ny fifanampiana rehefa nanoratra ny boky Harry Potter voalohany ary natolony an'ireo mpanonta. Nolavina imbetsaka am-polony talohan'ny nanararaotan'ny trano fanontana azy io. Fantatry ny rehetra amin'izao tontolo izao ve izany andiany boky / sarimihetsika izany? Tsara tarehy!
Rodin dia nolavin'ny Ecole des Beaux Arts (sekoly kanto tsara) intelo . Ka dia nampianatra ny tenany tamin'ny fanaovana sary sokitra izy, ary lasa iray amin'ireo mpanakanto malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
(Ary mba hanarahana ilay teboka teo aloha momba ny fandavana ho fanomezana dia nampahafantatra azy ny namany Jules fa tena nanam-bintana tokoa izy fa afaka nandositra fampianaran-tsaina tao amin'io sekoly io. Nilaza tamin'i Rodin izy hoe: 'Mety hamono anao izany.')
Misafidiana olona malaza manaitra aingam-panahy anao satria miverina mitaingin-tsoavaly foana izy ireo ary maharitra. Rehefa mahatsiaro ho kivy ianao noho izany dia tsarovy ny tantaran'izy ireo. Hanampy anao hiverina amin'ny soavaly koa izy ireo.
5. Mitsangàna ary manandrama indray rahampitso.
Ny fomba tokana ahazoana antoka fa tsy hahomby dia amin'ny tsy fanandramana mihitsy.
Tsy midika akory izany fa mila mametaka tsiky sandoka amin'ny tavanao ianao ary mihetsika toa tsy maharary ny lavina hatrany. Ny dikan'izany dia mandà tsy hamela ny habibiana eto amin'ity tontolo ity hanimba ny fanahinao tsara tarehy ianao.
Ny fiatrehana fandavana tsy tapaka dia mety hahatonga ny olona te ho kivy fotsiny. Ny mandratra hatrany hatrany dia mety hahatonga ny olona hiady saina na dia manandrana aza. Matetika izy ireo dia mahatsapa fa tsy misy ilana azy, fa holavina fotsiny indray izy ireo.
ny fomba hanavahana ny maha samy hafa ny filana sy ny fitiavana
Tadidinao ny fomba niresahantsika momba ny tsy hifandraisana amin'ny vokany? Miezaha mifantoka amin'ilay zavatra niainany mihitsy, fa tsy manantena ny hahita fomba iray manokana. Tsy misy miraikitra = tsy misy diso fanantenana.
6. Raha mitarika fandavana tsy tapaka ny làlana alehanao dia alao ny anao.
Aleo lazaina fa nolavin'ny mpanonta isaky ny mandefa ny sora-tanana ianao. Fantatrao fa nanoratra boky mahatalanjona ianao, saingy mandray valiny hatrany ianao toa ny, 'tsy fantatray hoe aiza no aiza no hamoahana an'io,' na, 'tsara izany, saingy tsy fantatra raha afaka mivarotra azy izahay.'
Mahasosotra izany, saingy misy ny vahaolana.
Azonao atao ny mamoaka tena, na manomboka ny orinasanao mamoaka boky. Aorian'izay dia avoaho izy.
Ary raha mbola eo ianao dia mamoaka boky mpanoratra hafa izay tsy hanararaotan'ireo orinasa lehibe kokoa.
Ity fomba fiasa ity dia afaka miasa amin'ny làlan'ny asa rehetra azonao eritreretina.
7. Angataho ny namanao hilaza aminao ny zavatra tiany momba anao.
Rehefa manome fotoana mahafinaritra ny olona ianao dia matetika izy ireo no hiakatra. Mankanesa any amin'ireo namanao sy olona ao amin'ny fianakavianao ary anontanio azy ireo ny zavatra tian'izy ireo momba anao, ny toetra mampiavaka azy ireo ary inona ny toetranao tsara indrindra.
Ataovy mora foana izany lisitra izany isaky ny mahatsiaro ho tsy misy dikany ianao. Ny fahafantarana fa mihevitra anao fatratra ny olon-kafa, tia anao, mankasitraka anao ary mankafy anao dia afaka manangana fahatokisan-tena simba eo indray.
8. Mitadiava fanampiana!
Ny mpitsabo tsara dia afaka manampy anao hiasa amin'ny alàlan'ny fahasimbana ara-pihetseham-po maharitra amin'ny fandavana tsy tapaka, saingy tsy izany ihany no karazam-panampiana azonao omena anao.
Indraindray, ny fandavana tsy tapaka dia ahafahantsika mahalala fa mila manova zavatra momba ny fomba fiasa isika. Mety ho zavatra azo ovainaina mora foana ity, saingy mety manana toerana tsy mazava momba izany isika. Vokatr'izany dia mila fanampiana kely isika hahita izay mbola tsy mazava amintsika hatreto.
Ohatra, raha tsapanao fa nolavina daholo ny fangatahanao asa dia manaova fotoana amin'ny mpanolotsaina momba ny asa mba hamerenanao hevitra. Izy ireo dia mety manana tolo-kevitra momba ny fanamboarana haingana izay hampiodina ny fikarohana ataonao eo ho eo!
inona no nitranga tamin'ny maso shawn michaels
Toy izany koa, raha hitanao fa mahazo daty voalohany betsaka ianao fa tsy misy faharoa dia anontanio ny namana atokisana hanaloka anao. Afaka mipetraka eo akaiky eo izy ireo ary mandinika ny fifaneraserana, ary mampahafantatra anao ny saina mena mety ho tonga. Ny zavatra tsotra toy ny fampiasana andian-teny manokana dia mety hanosika ny hafa fa tsy hanatona azy ireo akaiky kokoa.
Matetika, ny fanovana kely vitsivitsy dia mety hiteraka fahasamihafana lehibe raha ny amin'ny firosoana amin'ny fikatsahanao zavatra.
Ireo fiovana rehetra ireo dia ankilabao, raha efa niatrika fandavana tsy tapaka nandritra ny fotoana kelikely ianao dia mety misy ratra sy olana lalina lalindalina kokoa. Ity karazana fandavana ity dia mety hiteraka fitaintainanana sy tahotra mafy, ohatra. Izy io dia mety hiteraka famoizam-po, na koa tsy fikorontanan-toetra.
Raha tsapanao fa ny fandavana efa niainanao dia nanimba anao ampy ka mila fanampiana fanampiny ianao amin'ny alàlan'io dia aza matahotra ny mitady azy. Farafaharatsiny rehefa mitady fanampiana ara-pahasalamana ara-tsaina dia tsy hisy ny fandavana. Izany no ilain'ny mpitsabo! Tsindrio eto raha hahita iray eo akaikinao na hiasa lavitra ianao.
Mety ho mariky ny fanaovana sabotage amin'ny tena ve ny fandavana?
Misy zavatra farany tokony hodinihina, ary izany no mety hisehoan'ny fandavana tsy tapaka ity fanaovana sabotage samirery .
Ny olona sasany miatrika fanilihana tsy tapaka dia mety hikatsaka asa, fialamboly, ary na dia ny mpiara-miasa izay tsy tena tadiavin'izy ireo amin'ny sehatra ifotony aza. Vokatr'izany dia manao sabotage samirery izy ireo mba hialana amin'ny fahazoana izay tadiavin'izy ireo (amin-katezerana).
Andao lazaina fa misy mankahala ny asany.
Mety naharesy lahatra ny tenany izy ireo fa ny tontolon'ny asany ankehitriny no ankahalainy, fa tsy ny asany nofidiny. Raha tsy izany dia mety terena izy ireo hiasa amina sehatra na toeram-piasana manokana ataon'ny fianakaviany, saingy tsy te-hanao izany mihitsy.
Ka tsy mametraka fiezahana marina amin'ny fanatsarana ny resume izy ireo, ary raha mahazo resadresaka amin'ny asa izy ireo dia tsy miraharaha izany mihitsy. Avy eo, rehefa tsy mahazo ilay asa izy ireo dia afaka manome tsiny azy ireo fotsiny amin'ny 'fandavana tsy tapaka.' Lasa faminaniana manatanteraka ny tenany izany.
Ilay olona sosotra noho ny fiezahany dia mety hahatsapa ho maivamaivana mihitsy rehefa tsy mahazo an'io asa io, na io daty io. Tsy mila mihevi-tena ho tsy izy intsony izy ireo.
Aza hadino ny tenanao momba izay tena tianao, ary nahoana. Avereno jerena ireo fotoana samihafa nandavana anao: mety hanampy ny manoratra momba azy ireo ao amin'ny diarinao.
Arotsaho ireo naoty ireo raha hahitana raha misy ny anarana iraisana izay miakatra hatrany. Raha mamely ilay rindrina iray ihany ianao, dia azo antoka fa hahita làlana vaovao manodidina azy ianao. Na mihoatra azy.
Na afaka mahita fomba handondonana an'io rindrina io ianao ary hamela lalana manaloka ao aorianao.
ahoana ny fijanonana amin'ny fianteherana amin'ny hafa
ny fomba ahazoana firaiketam-po amin'ny sakaizanao
mariky ny tsy fahatokisan-tena amin'ny lehilahy
ny fomba ahafahantsika manova an'izao tontolo izao
hahita olona tia ahy ve aho